Halkalı Gebze Marmaray မြေပုံစခန်းများနှင့်ပေါင်းစည်းထားသောလိုင်းများ | RayHaber | မီးရထားလမ်း အဝေးပြေး | ကေဘယ်လ်ကား
ပင်မစာမျက်နှာတူရကီMarmara ဒေသကြီး34 အစ္စတန်ဘူလ်Halkalı Marmaray Gebze မြေပုံရပ်ပြီးပေါင်းစည်း Lines
08 / 11 / 2019 rayhaber 34 အစ္စတန်ဘူလ်, ခရီးသည်ရထား, ရထားလမ်း, အထွေထွေ, Maps, မြို့ပြရထားစနစ်များ, ခေါင်းစီးသတင်း, Marmara ဒေသကြီး, တူရကီ, ဗွီဒီယို 0
Halkalı Gebze Marmaray ရပ်တန့်ခြင်းနှင့်အချိန်ဇယား - Marmaray, ဥရောပနှင့် Anatolian ဘေးထွက်ကိုဆက်သွယ်သည့်စီမံကိန်း Halkalı နှင့် Metro နှင့် ပတ်သက်. အချက်အလက်အားလုံးကိုရပ်နှင့်အချိန် Gebze များ၏ content တှငျတှေ့နိုငျပါသညျ။ Halkalı Gebze Suburban လိုင်း 2019 တွင် Marmaray စီမံကိန်း၏သက်တမ်းအတွင်းအသစ်လိုင်းများပါ ၀ င်သည်။ Halkalı ဒီသတင်းထဲမှာ Gebze Metro Line Stations အကြောင်းသတင်းအချက်အလက်တွေပေးပါတယ် Halkalı သငျသညျ Marmaray Expedition နာရီနှင့်ပတ်သက်။ အသေးစိတ်အချက်အလက်အားလုံးကိုရှာတွေ့နိုင်ပါသည်။
ဥရောပခြမ်းတွင်တည်ရှိသည် Halkalıက start ကနေ Gebze ရရှိသောရန်။ ဥရောပဘက်ခြမ်းတွင် Halkalı နှင့်Kazlıçeşme Marmaray, Anatolian ဘက်မှAyrılıkစမ်းရေတွင်းနှင့် Gebze အကြားသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးထောက်ပံ့ပေးနေစဉ်။ ဤစီမံကိန်း၏ပထမအဆင့်ကို Anatolian Side နှင့် European Side ကိုဆက်သွယ်ပေးသောKazlıçeşme Separation Fountain လိုင်းဖြင့်တည်ဆောက်ခဲ့ခြင်းကိုအစ္စတန်ဘူလ်မြို့သားများကောင်းစွာသိကြသည်။
Marmaray Halkalı Gebze လိုင်းအကြောင်း
Dimetronic SA ဖက်စပ်ကုမ္ပဏီတွင်ရှိသော Obrascon Huarte Lain SA 1 ဘီလီယံယူရို နူးညံ့သော။ 76.6 ကီလိုမီတာ ရှည်လျားသော, Gebze Pendik Ayrılıkçeşme Sirkeci Zeytinburnu Bakırköy Halkalı Marmaray လိုင်းဖွင့်ပြီးနောက် 75 တစ်သောင်းခရီးသည်တစ်လမ်းတည်းဖြင့်သယ်ဆောင်သွားမည်ဖြစ်ပြီး 96 တထောင်ခရီးသည်တစ်နေ့လျှင် 1.2 ယာဉ်များဖြင့်သယ်ယူပို့ဆောင်လိမ့်မည်။ တစ်နာရီလျှင် 28 လေ့လာရေးခရီး စီစဉ်ထားသည် 43 ဘူတာရုံလိုင်းအချို့၏ဘူတာများတွင်အဓိကလိုင်းရထားများနှင့်မြန်နှုန်းမြင့်ရထားများလည်းရပ်သွားလိမ့်မည်။ ဒီမျဉ်းကိုတည်ဆောက်ပြီးစီးသောအခါအစ္စတန်ဘူလ်ရှိမက်ထရိုနှင့်ရထားနှင့်ပေါင်းစပ်သွားမှာပါ။ မြို့နှစ်ဖက်စလုံးရှိကမ်းရိုးတန်းနှင့် E-5 အသွားအလာကိုများစွာလျှော့ချရန်စီစဉ်ထားသည်။
Halkalı Gebze မြေအောက်ရထားထဲမှာအထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်း 42 မှတ်တိုင် ဒါဟာတည်ရှိသည်။ Halkalı 115 မိနစ်ဆင်းရပ်တန့်ဖို့ Gebze အကြားစုစုပေါင်းကာလနှင့်အတူ။ အကျဉ်းဖြစ် Halkalıထွက်ခွာသွားသည် 115 မိနစ် အမည်ရ 1 55 နာရီမိနစ် ဒါဟာ Gebze အတွက်ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ ပိုမိုသိရှိလိုပါကများအတွက် Marmaray ၏မြေပုံရည်ညွှန်းကိုးကား!
Halkalı Gebze Istanbul Metro မြေပုံ
Halkalı Gebze ကြေးအချိန်ဇယား
Marmaray Halkalı-Gebze ဆင်ခြေဖုံးလိုင်းစမ်းသပ်မှု…
Halkalı-Gebze Marmaray 43 မှတ်တိုင်များဖြင့်ရထားများ ...
BTS "Gebze သတိပေး Halkalı Marmaray လိုင်းဖွင့်ရန်…